Tsy misy mahasakana ny fihaonantsika amin’i Jesoa – FJKM Ambavahadimitafo Tsy misy mahasakana ny fihaonantsika amin’i Jesoa |
Tsy misy mahasakana ny fihaonantsika amin’i Jesoa
Publié le 08 novembre 2012 à 12:11
Marka 2 : 1-12 : « 1Ary nony niditra tao Kapernaomy indray Izy, rehefa afaka andro vitsivitsy, dia re fa tao an-trano Izy, 2ka dia tafangona ny maro, ka tsy nisy hitoerana intsony, na dia teny anoloan’ny varavarana aza; ary Izy nitory ny teny taminy. 3Ary nisy nanatona nitondra ny anankiray mararin’ny paralysisa ho eo aminy, izay nolanjain’efa-dahy. 4Ary satria tsy afaka nanakaiky Azy izy noho ny habetsahan’ny vahoaka, dia nanesorany ny tafon’ny trano nitoeran’i Jesosy, ka nony efa voasokatra, dia nampidininy teo ny fandriana izay nandrian’ilay nararin’ny paralysisa. 5Ary Jesosy, nony nahita ny finoan’ireo, dia nanao tamin’ilay mararin’ny paralysisa hoe: Anaka, voavela ny helokao. 6Ary nisy mpanora-dalàna sasany nipetraka teo ka nieritreritra tao am-pony hoe: 7Nahoana Ilehity no miteny toy izany? Miteny ratsy# Izy. Iza no mahavela heloka afa-tsy Iray ihany, dia Andriamanitra? 8Ary niaraka tamin’izay Jesosy dia nahalala tao am-panahiny fa nieritreritra izany tao am-pony ireo, dia hoy Izy taminy: Nahoana ianareo no mieritreritra izany zavatra izany ao am-ponareo? 9Iza moa no moramora kokoa, ny manao amin’ilay mararin’ny paralysisa hoe: Voavela ny helokao, sa ny manao hoe: Mitsangàna, betao ny fandrianao, ka mandehana? 10Fa mba ho fantatrareo fa ny Zanak’olona manana fahefana et? ambonin’ny tany hamela heloka, dia lazaiko aminao (hoy Izy tamin’ilay mararin’ny paralysisa): 11Mitsangàna, betao ny fandrianao, ka modia any an-tranonao. 12Dia nitsangana izy ka nambeta ny fandriany niaraka tamin’izay ary niala teo anatrehan’ny olona rehetra; dia talanjona izy rehetra ka nankalaza an’Andriamanitra nanao hoe: Tsy mbola nahita izay toy izao izahay. »